ခင်ဦးသာ| January 18, 2013 | Hits:7,039
| | လွှတ်တော်နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ “ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ လွှတ်တော် ရှိသလား” ခေါင်းစဉ်နဲ့ အွန်လိုင်း ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာတခုမှာ ရေးသားသူ ကလောင်အမည် ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ဆိုသူကို စုံစမ်းဖော် ထုတ်ဖို့ ကော်မရှင်တရပ် မကြာမီ ဖွဲ့စည်းပါတော့မယ်။
pnwara January 18, 2013 - 6:25 pm ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ ဝေဖန်တာ အဆန်းလား အမတ်မင်းတို့ ရယ်-ကော်မရှင်ဖွဲ့ ပြီး စုံးစမ်း-စစ်ဆေးတာကမှ အရပ်ရပ်နေပြည်တော် လူကြားလို့ မှ မတော်- သူလဲ သူ့ အမြင်ကိုရေးသားတင်ပြတာဘဲ- သူရေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့- အဲသူရေးတဲ့အတိုင်းမှန်နေလျှင် ပြင်လိုက်ပေါ့- အလကားအချိန်ကုန်ခံပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ အရေးမပါတဲ့ ကိစ္စ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်နေတယ်- ခင်ဗျားတို့ ပေးထားတဲ့လစာက ပြည်သူလူထုက အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေနော်- ဘိုးဘွားဆီက အမွေရတယ် ထင်မနေနဲ့ - လွှတ်တော်ထဲမှာ လူထုအတွက် လုပ်ရမည့်ကိစ္စတွေ အများကြီး- အလကားအချိန်ကုန်ခံ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာတွေ သုံးဖြုံးမနေကြနဲ့ - ဒါနဲ့ နေစမ်းပါဦး- တဆိတ်လောက်ဗျာ- အဲဒီ ပရော်ဖတ်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားက ဘယ်မှာရေးထားတာလဲ- လင့်-လေးသိသူများ- ကျေးဇူးပြု၍ ဖေါ်ပြပေးပါခင်ဗျ-
Reply sau January 18, 2013 - 7:26 pm ဘာမှမဟုတ်တဲ့.ဆိပ်ဖွားလိုလူသားတစ်ဦးရဲ့..ဝေဖန်ခြင်းကို.မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီး..နိုင်ငံတော်.ပုံကန်မှုအလား.စုံစမ်းစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်တောင်ဖွဲ့စည်းရသလား..ရီစရာတော့..ကောင်း..သား.တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့အကူညီနဲ့..ခေတ်မှီဆန်းပြားတဲ့.အီလက်ထရောနစ်.ကွန်ပြူတာ.နည်းစံနစ်တွေပိုင်ဆိုင်နေတာတောင်..ဆိပ်ဖွားဆိုတာ.ဘယ်ကနေပြီး.၀က်ဆိုဒ်ကနေ.ဝေဖန်နေသလဲဆိုတာတောင်..မသိနိုင်ဘူးတဲ့လား..၀ီခီလိ.ကတာဝန်ရှိသူကို.ဘယ်လိုနည်းနဲ့.မိသွားသလဲဆိုတာကိုကော..မသိတော့ဘူးတဲ့လား..မြန်မာနိုင်ငံမှာ..အားလုံးဟာ..မကောင်းဘဲ..စုတ်ပြတ်နေမယ်..ဒါပေမဲ့..အစိုးရတွေရဲ့..ထောက်လှမ်းရေး..ကိစ္စမှာ..ရံပုံငွေကိုအပြည့်ဝသုံးစွဲပြီး..ထောက်လှန်းရေးကိစ္စကိုတော့.ပါတ်.ကားဖြစ်အောင်ကိုတော့.သူတို့တွေစီမံပြီးသား….နောက်တစ်ချက်..သူများက.ကိုယ်လုပ်တာကိုဝေဖန်တာဟာ.မကောင်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာ..ကိုယ်.က.မဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့.ကြောက်ကြမှာပေါ့..မြန်မာစကားပံရှိခဲ့ပါတယ်.ကိုယ်.ကောင်း..ဘယ်ခေါင်းမှ.မရွေ့တဲ့..ဒီမိုခရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာ.သမ္မတ.အပါဝင်.လွတ်တော်..လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်..နဲ့.အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးက..ပြည်သူပြည်သားနိုင်ငံသားအားလုံးတို့ရဲ့မည်ကဲ့သို့သောဝေဖန်ပြောဆိုမှုမျိုးတို့ကို..လက်ခံ..ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာပါ..သမ္မတကြီးတွေကလည်း(တရုတ်ကလွဲလို့)ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းသည်ကောင်းသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်..မည်ကဲ့သို့သော..ဝေဖန်ပြောဆိုမှုမျိုးကိုမဆို..၀မ်းမြောက်စွာ.ကြိုဆိုလက်ခံပါသည်..ဆိုတာ.အမြဲပြောကြပါတယ်..ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှလွတ်တော်.ဥက္ကဌ.အပါဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်.များဟာ..ဒိလို.ဆိပ်ဖွားရဲ့.ဝေဖန်မှုလေးကိုတောင်..လက်မခံနိုင်ကြဘူးတဲ့လားးသူ့ရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုရေသားမှုမျိုးဟာ.မှားသည်..မှန်သည်.တရားသည်.မတရားသည်.တွေဟာ..ပြည်သူတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ..ဒီလောက်တောင်..ကော်မရှင်ကြီးတစ်ရပ်ဖွဲ့ပြီး.စုံစမ်းဖို့.လုပ်နေကြတာဟာ.အိုးမလှုံးအုံပွင့်.ဆိုတဲ့စကားနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနေသလိုပါဘဲ..ခင်ဗျားတို့အားလုံး..ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့..ကိုယ်စားလှယ်တွေပါရယ်လို့..ကိုယ့်ကိုယ်.ကို.သတ်မှတ်ထားတတ်ကြရင်.ဒီလောက်ထိ.နာကြည်းနေကြ၇သလား…ကျွန်တော်ပြောချင်တာ..ခင်ဗျားတို့ပြော.ပြောနေတဲ့.ဥပဒေဆိုတာကြီးကို.ဘယ်သူတွေက.ရေးဆွဲပြီး.အတည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်.ဘယ်သူတွေက.ဆန္ဒမဲပေးပြီး.အတည်ပြုခဲ့ကြရတာလဲ..ဥပဒေကို.ခင်ဗျားတို့ကရေးဆွဲတယ်ထားဦး..ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့တော့.ဒီဥပဒေကြီးဟာ.ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါ့မလား.ကျွန်တော်ထင်တယ်..ခင်ဗျားတို.ဒီလိုသာ.ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်..ဆိပ်ဖွားဆိုသူရဲ့.လက်ထဲမှာ.ခင်ဗျားတို့ရဲ့.ဘာ.ညာ..ဘာ ညာ.ဆိုတာတွေဟာ..ရှိကောင်းရှိနေဦးမလားဘဲ..၀ီခီလိ.ကိုနမူနာယူပါ..တစ်ခုပြီးတစ်ခု..တဖြေးဖြေးချင်း.ဘူးပေါ်သလို.ပေါ်လာနိုင်တယ်နော်….အမှား.အမှန်.ဟာ.ပြည်သူတွေသာဆုံးဖြတ်မှာပါ…
ReplyaJanuary 18, 2013 - 7:50 pm ကိုယ်စားလှယ် ၆၀၀ကျော်ထဲမှာမဲမသမာလို့ရောက်လာတဲ့သူအများစုနဲ့ပြည်သူကမဲမပေးရပဲရောက်လာတဲ့သူတွေကများနေတော့ဘယ်တော့မှမမှားနိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါ့မလား။
Reply Shwe Yoe January 18, 2013 - 10:42 pm How can U Win Oo from USDP say that they were elected by the people? He is the one who misleads the people. He is not telling the truth. USDP is no way near to be our heart and soul. Casting votes for oppressors did not happen, is not happening and will not happen. USDP stole votes and manipulated the public in election. Who in the hell will knowingly cast their votes for this evil party? No way. Intimidation and threat may make people to cast their votes to this party but he has no shame when he says that people elected them.
Reply Salai Lian January 18, 2013 - 11:32 pm Their behavior isathreat to freedom of speech andadirect threat to freedom of press and expression which Hlutdaw supposed to defend. Do the Hlutdaw members have insecure feeling? If they are confident in what they are doing, why may never go to confront the person who wrote about Hlutdaw’s weakness. Their action may come back to hurt more to the image of Hlutdaw.
Reply ဌေးဝင်း January 19, 2013 - 8:20 am ကချင်ပြည်နယ်မှာ…KIA နဲ့ဖြစ်နေတဲ့..စစ်ပွဲတော့ရပ်ဖို့..မဆွေးနွေးဘူး..မဟုတ်က..ဟုတ်က..ကြောင်ေ၇ချိုး..***သန်းရှာတဲ့…ဟာမျိုးကျတော့..စုံစမ်းဖို့..လွှတ်တော်ကိုတင်ပြတယ်…မဲခွဲဆုံးဖြတ်တာလဲအနှိုင်၇တယ်ဆိုတော့..ကြံ့ဖွတ်ပါတီကတင်ပြပြီးးးကြံ့ဖွတ်ပါတီကထောက်ခံတာဖြစ်မှာပေါ့…ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ဘယ်သူဆိုတာသိပြီဆိုပါတော့….သူတို့အဘဖြစ်နေ၇င်…ဘာလုပ်နှိုင်မှာလဲ..ထိုင်ရှစ်ခိုးကြမှာလား။
Reply Mon- Kayin January 20, 2013 - 1:48 am အသုံးမကျတဲ့လူတွေက လွှတ်တော်ထဲမှာ ၀န်ကြီးဖြစ်လိုက် အမတ်ဖြစ်လိုက်နဲ့ တွေ့နေရတယ်။
Reply Chinlay January 20, 2013 - 9:50 pm Shameful,, shameful,, Myanmarh democracy,,Burma democracy
Reply ဇော်ဂျီနက် February 3, 2013 - 12:31 am နဂိုတည်းကမှ လူမှုရေးအသင်းဆိုပြီး ကြွေးကြော်၊ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အသင်းပိုင်မြေ၊